Macallin Didier Deschamps oo sharraxay sababta uu Martial iyo Lacazette uga reebay xiddigaha xulkiisa Faransiiska ee uu sanadkan kala qeyb galayo Koobka Adduunka – Gool FM
(Paris) 18 Maajo 2018. Macallinka xulka qaranka Faransiiska ee Didier Deschamps ayaa ku dhawaaqay 23-ka ciyaaryahan ee uu kala qeyb galayo koobka Adduunka ee bisha soo socota ka furmaya dalka Ruushka.
Didier Deschamps waxa uu sharraxay go’aanka uu uga soo tagay labada ciyaaryahan ee xiddiga Manchester United ee Anthony Martial iyo kan kooxda Arsenal ee Alexandre Lacazette.
Shaxda uu shaaciyey macallin Deschamps ee kama dambeysta Koobka Adduunka waxaa ka mid ahaa xiddiga kooxda Atletico Madrid ee Antoine Griezmann, da’yarka PSG ee Kylian Mbappe, laacibka khadka dhexe ee Man United Paul Pogba, ciyaaryahanka Real Madrid ee Raphael Varane, difaaca kooxda Barcelona ee Samuel Umtiti iyo Kabtanka kooxda Tottenham ee Hugo Lloris.
Yeelkeede, Deschamps ayaa go’aansaday inuusan 23-kiisa ciyaaryahan ee uu sanadkaan u kaxaysanayo Koobka Adduunka ku darsan labada ciyaaryahan ee ka dheela Premier League Martial iyo Lacazette, kaasoo sanadkan seegay ka qeyb galkood Koobka Adduunka.
Isagoo Saxaafadda la hadlayey intii lagu guda jiray shirkiisa Jaraa’id, macallin Deschamps ayaa sharraxay go’aanka uu uga soo tagay labadaan ciyaaryayan ee Martial iyo Lacazette, waxaana uu yiri:-
“Way fiicnaayeen kulankii ay ka hortageen Germany bishii November 2017, balse wuxuu ahaa hal kulan oo qura, marka laga soo tago kulankaas ma aysan fiicneyn.”
“Waa falan-qeyn guud oo ku saabsan waxa ay sameyn kareen xaaldaha qaar iyo marka loo eego door ceynkee ah ay shaxda ku heysan karaan.”.
Sababa la xiriira koobka aduunka 2018…. Sandro Wagner oo qaadacay Germany iyo Joachim Löw oo ka jawaab celiyay